नेविसंघको अधिवेसन सम्भावना र चुनौती
३५ वर्ष नाघेकाहरुलाई पदाधिकारी नबनाउ
Tuesday,3May, 2016 1:38 PM
नेपाली काँग्रेसको बलियो भातृ संगठनका रुपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघ वर्तमान समयमा विगतको भन्दा कमजोर नै रहेको छ । आन्तरीक र बाह्रय कारण पार्टी भित्रको गुटउपगुटका कारण काँग्रेस नेताहरुको प्रभाव र दबावले नै नेविसंघलाई कमजोर बनाएको कुरा लुकाउन पर्ने छैन । सस्थापन र प्रजातान्त्री पक्ष अनि त्यसमा पनि नेता नै पिच्छेका साहयका नेताहरुका कारण पनि नेविसंघ कमजोर बन्न पुग्यो ।
सबै कुराका बाबजुत वर्तमान नेविसंघका अध्यक्ष र अहिलेको समितिले आफ्नो कमजोरीलाई नैतिक रुपमा जिम्मा लिनु पर्दछ । त्यस भित्रका पक्षहरु फरक फरक भएपनि संगठनको अवस्था कमजोर हुँदा नेतृत्वले त्यसको अजअपजस लिनै पर्दछ । नेपाली काँग्रेसको १३ औं अधिवेशन पश्चात पार्टी भित्रको संस्थापन र प्रजातान्त्रीकको तर्क विर्तकहरु स्वतः कमभएर गएका छन ।
पार्टी सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले भातृ संगठनको अधिवेशन गराउन नेतृत्वलाई निर्देशन दिएपछि स्वभाविक रुपमा भातृ संगठनहरु च्लायमान भएका छन । धेरैले वर्तमान सभापतिले तरुणदल, नेविसंघ जस्ता भातृ संगठनको अधिवेशन गर्न नयाँ व्यक्तिहरुलाई टिका लगाउनेछन भन्ने अनुमानलाई गलत सावित गदै अधिवेशन गराउन वर्तमान अध्यक्षहरुलाई जिम्मा दिएपछि भातृ संगठनका नेताहरु अधिवेशन तयारी भन्दै आफ्नो प्रचारमा जुटेका छन ।
काँग्रेसको १३ औं अधिवेसनले व्यवस्थित रुपमा प्रदेशको नेताहरुको चयन गर्न सकेन । संघिय संरचना अनुरुपको संगठनलाई पुर्णत कार्यान्यवनमा ल्याउन सकिरहेको छैन । नेविसंघ र तरुणदलको अधिवेशन मार्फत काँग्रेसले पार्टी संरचनाको स्वरुप हेर्नका लागि भएपनि सोहि अनुरुपको तयारीका साथ भातृ संगठनको अधिवेशन गर्नुपर्दछ ।
नेविसंघको ११ औं अधिवेशनलाई स्वयम् विद्यार्थी नेताहरु र पार्टीले राम्रै भुमिका निर्वाह गनुपर्दछ । २०२७ साल बैसाख ६ गते स्थापना भएको नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर देउवा देखी प्रदिप पौडेल सम्मका अध्यक्षहरु काँग्रेस नेतृत्व तहमा पुगिसकेका छन । अब नेविसंघको अधिवेसन र संरचना के त्यहि पुरानै पद्धति अनुरुप नै गर्ने हो । के बाबु र छोरा उमेरका विच नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो ? के नविनतम् युगका विद्यार्थीहरु नेविसंघको केन्द«मा आउन अमुक दरबारको पक्षपोषक नै हुनुपर्ने हो ? वर्तमान विद्यार्थी राजनीति के सामुदायीक क्याम्पसका प्रतिनिधीहरु मात्र अटाउने हो ? विद्यार्थी कै राजनीति गर्न न्युनतम शिक्षाका विषयमा बहस सञ्चालन नगर्ने नै हो ? कयौं सैदान्तिक र व्यवहारीक पक्षहरुका विषयमा बहस नै नगरी गरिने नेविसंघको अधिवेशनले नेपाली राजनीतिमा के परिर्वतन गर्ने हो ?
संधिवानको कार्यान्यवनमा के भुमिका निर्वाह गर्ने हो ? अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी आन्दोलनमा आफ्नो बलियो प्रभाव पार्न के निति अख्तियार गर्ने हो ? शिक्षामा हुने विभेदलाई कसरी समान बनाउने तर्फ लाग्ने हो ? देश भित्र देशमै तयार भएका पुस्तक समेत नपाइ अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका विद्यार्थीहरुलाई वि.पि. सुवर्ण शम्सेर, गणेशमान, किसुनजी गिरिजाबाबुका बारेमा कसरी बुझाउने हो ? नेविसंघको अधिवेशन के काठमाडौं र केहि विकसित मानिएका शहर बजारमा अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको फोटो देखाएर मात्र गरिने हो ।
२०६४ देखी २०७३ सम्म आँउदा विद्यार्थीहरुमा राजनैतिक वितृष्णा बढेको अवस्थमा नेविसंघको अधिवेशन हुनु अवसर चुनौतीको अध्ययन गर्ने सुर्वण अवसर हो । यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि केहि नेताहरुले ठुलो छाती बनाउनै पर्दछ । राजनीतिलाई यदि लामो रेस मान्ने हो भने वर्तमान नेविसंघको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुमा ३५ वर्ष ननाघेकाहरुलाई अवसर दिनु पर्दछ । निजि तथा सामुदायीक उच्च मा.वि. तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई संगसंगै संगठनमा राख्नुपर्दछ । प्राविधिक विषयहरुमा सोहि अनुरुपको अधिवेशन तयारी गरिनु पर्दछ । प्रदेशका संयोजक तथा सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
केन्द्रिय समिति तथा पदाधिकारी मा न्युनतम शिक्षाको तह उल्लेख गरिनुपर्दछ । नेविसंघ आफैले विद्यार्थीलाई रोजगारका ढोकाहरु खुल्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्दछ । नेविसंघका जिल्लाहरुलाई पूर्ण अधिकार दिई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । क्याम्पस युनिट र जिल्ला, क्षेत्र तथा प्रदेशका काम कारबाही स्पष्ट रुपमा वर्गीकरण गरेर मात्र नेविसंघको अधिवेशन गराउनु पर्दछ । यस अवस्थामा मात्र काँग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघको गर्विलो इतिहासलाई जोगाउन सकिन्छ । वर्तमानको बलियो संगठन बनाउन सकिन्छ । सुन्दर भविष्य खोज्ने विद्यार्थीहरुलाई संगै लिएर जान सकिन्छ ।
यदि अधिवेशनका लागि मात्र अधिवेशन हुने हो भने विचारको भन्दा बलको दबदवा यस अधिवेशनमा पक्का हुने छ । वैचारीक बहस शुन्य हुने छ । लामो समय अध्यक्ष बन्न लाईन बसेका अग्रज नेताहरु विचको व्यक्तिगत टकरावले संगठनलाई द्धन्द्ध तर्फ लैजाने छ । त्यसको असर सिङ्गो पार्टीले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर्सथ नेविसंघको पहिचान सहित काँग्रेसको नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरुले समयअनुकुल नेविसंघको संगठनलाई अघि बढाउन पहल गर्नुपर्नेछ । अवसर र चुनौती भनेको नै त्याग, समर्पण र प्राप्तीको गोरेटो हो । नेविसंघको ११ औं अधिवेशनले संगठनले सबै गुमाउने भन्दा पनि ,केहि पाउने अधिवेशन बन्न सक्नुपर्दछ ।